एमालेको रामरमिता - नागरिक रैबार
दम्भ, अहंकार, कुण्ठा, निरीहता, हुतिहारापन र अवसरवादी चरित्रजस्ता अनेक अराजनीतिक प्रवृत्तिका भारीले एमाले उठ्नै नसक्ने गरी थिचिएको छ ।
राजराम गाैतम । कम्युनिस्टहरू राजनीतिक पतनको डिलमा पुगेपछि प्राचीन पात्रहरूमा आफ्नो जीवन खोज्छन् । प्राचीन युनानी मिथका दुई पात्र नार्सिसस र फिनिक्स चरोको कथा नेपाली कम्युनिस्ट वृत्तमा चर्चित छ ।
नार्सिसस अपार सम्भावना बोकेको एउटा पात्र हो, जो आफ्नै सुन्दरताप्रति अधिक मोहित भएर मर्छ । आफ्नो अनुहारको प्रतिविम्ब हेर्न नहुने श्राप पाएको ऊ पानी खोज्दै एक दिन पोखरीको डिलमा पुग्छ । आफ्नो सुन्दर अनुहार देखेर ऊ यति मोहित हुन्छ, त्यहाँबाट आफूलाई हटाउनै सक्दैन र मर्छ । फिनिक्स चरो आफ्नो आयु सकिएपछि आगोमा जलेर खरानी हुन्छ र त्यही खरानीबाट ब्युँतेर नयाँ काया लिएर उड्छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) रहँदै पार्टीमा अन्तरविरोध चुलिएपछि सैद्धान्तिक ‘डिस्कोर्स’ गर्न रुचाउने नेता घनश्याम भुसालले २०७५ मंसिर ४ मा कान्तिपुरमा ‘कसरी बाँच्छ कम्युनिस्ट पार्टीर् ?’ शीर्षक लेखमा प्रश्न उठाएका थिए, ‘नेकपा आफ्नो रूप हेरीहेरी, आफैं हुन्छु दंग हुँदै नार्सिससजस्तो सकिने त होइन ? वा नयाँ शक्ति र जीवनका साथ फिनिक्सझैं अगाडि बढ्छ ?’
यी दुई सम्भावनामध्ये नेपाली कम्युनिस्टहरू नार्सिससको बाटोतिर उन्मुख भएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक कालखण्डमा नेकपासँग प्रचुर अनुकूलता थियो । जनताबाट अनुमोदित भएर सत्तामा पुगेको थियो । विरोध गर्ने प्रतिपक्ष कमजोर थियो । छिमेकहरूसँगको सम्बन्ध अनुकूलतामा बदलिएको थियो । अनेक उतारचढावपछि मुलुक अग्रगामी राजनीतिको बाटोमा थियो । रक्तरञ्जित इतिहासको जगमा नेपालको संविधान–२०७२ सहितका राजनीतिक उपलब्धि हासिल भएका थिए । मान्छेहरूले कम्युनिस्ट सत्तासँग आशा र अपेक्षा राख्न थालेका थिए । विडम्बना, आत्मरति र अहंकारको व्यूहबाट नेकपा निस्कनै सकेन । उसले जनअपेक्षामाथि निर्ममताका साथ कुठाराघात गर्‍यो, जनादेशको घोर अपमान गर्‍यो । र, आपसमै लडेर सिद्धिने बाटोतिर अग्रसर भयो ।
यदुवंशीझैं नेपालका कम्युनिस्टहरू पतनको बाटोमा छन् । विनाशको प्रतिस्पर्धामा नेकपा एमाले सबैभन्दा अगाडि छ । धेरै जनताले पत्याएको, जुझारु र तेजिला कार्यकर्ता भएको, केन्द्रदेखि तलैसम्म बलियो संगठन भएको पार्टीको छवि थियो एमालेको । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेपछि गठन भएको नेकपा झन् शक्तिशाली भएको थियो । चुनावी एकता हुँदै पार्टी एकता नै भएपछि मुलुकमा कम्युनिस्टहरूको दबदबा नै कायम भयो । कतिसम्म भने, त्यो दबदबामा चेपिएर कांग्रेस कमजोर प्रतिपक्षको हैसियतमा एउटा कुनामा निरीहझैं थन्किएको थियो । शक्ति–उन्मादले नेकपालाई छिन्नभिन्न पारेको छ भने किनारामा बसेर कम्युनिस्टहरूको ‘ताण्डव’ हेर्दै गरेको कांग्रेस सत्तामा पुगेको छ । र, तिनै कम्युनिस्टहरूले कांग्रेसलाई किस्तीमा सजाएर सत्ता सुम्पेका छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । उनले संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र एमालेकै २२ सहित १ सय ६५ सांसदले विश्वासको मत दिएपछि आवधिक निर्वाचन नहुँदासम्म उनले सरकारको नेतृत्व गर्ने भएका छन् । सरकारको नेतृत्व पाएर कांग्रेस उत्साहित छ । तर, आमरूपमा देउवाप्रति आकर्षण र उत्साह छैन । देउवा साख गुमेका नेता हुन् । पार्टीकै नेतृत्वको कुरा होस् वा यसअघिका प्रधानमन्त्रीय कार्यकालहरू होऊन्, उनी खरो उत्रन सकेका छैनन् । उनका लागि यो अर्को परीक्षा हो । फेरि उनले आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर पाएका छन् ।
देउवाको पाँचौं आगमनले उत्साह नभरे पनि ‘डिरेल’ हुँदै गरेको राजनीतिलाई पुनः लिकमा ल्यएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्तामोहमा फसेर अन्धाधुन्ध विधि मिच्दै संविधान र समग्र राजनीतिमाथि नै आघात पुर्‍याएका थिए, देउवाले त्यो घाउमा मल्हम लगाउने अवसर पाएका छन् । कोमाबाट ब्युँतेको राजनीतिलाई देउवाले के–कति मल्हमपट्टी गर्लान् ? त्यो आगामी दिनमा उनले लिने नीति र कार्यशैलीले तय गर्नेछ ।
अहिले भने सबैको ध्यान एमालेतिर छ, जो मरणासन्न भएर छटपटिएको छ । गम्भीर राजनीतिक उपचारको खोजीमा छ । एमालेको यो हबिगत किन र कसरी भयो ? के फिनिक्स चरोझैं खरानीबाट ब्युँतेर एमालेले नयाँ काया फेर्ला ? यी प्रश्नको सेरोफेरोमा यो विश्लेषण केन्द्रित रहनेछ ।
एक थरी एमालेहरू अहिले अदालतसँग रुष्ट छन् । फेरिएको राजनीतिक परिदृश्य र समीकरणमा अदालतको प्रभाव देख्छन् उनीहरू । अर्का थरीलाई लाग्छ, विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको प्रभावमा परेर एमाले छिन्नभिन्न भयो । तेस्रो थरीको धारणा छ— कांग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरूले खेलेका कारण एमालेको अन्तर्द्वन्द्व चुलियो । देउवा, प्रचण्ड आदिले बोकेका कारण माधव नेपाल ‘फ्लोर क्रस’ गरेर विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनतिर लागे । यी तर्कहरू पूर्ण असत्य होइनन् । खेल्ने ठाउँ दिएपछि विपक्षीले पनि खेल्छ, विदेशी स्वार्थ शक्तिहरूले पनि खेल्छन् । तर मूलतः एमाले आफ्नै कारणले पछारिएको हो । एमाले पछारिनुमा, यसले काया फेर्न नसक्नुमा केन्द्रदेखि वडासम्म हुर्केका केही प्रवृत्ति जिम्मेवार छन् ।
केही वर्षअघि ‘लिङ्ग नछुट्टिएको पार्टी’ भनेर नेकपा एमालेको आलोचना हुन्थ्यो । एउटा गुट कांग्रेसतिर ढल्कने, अर्को माओवादीतिर लहसिने गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा यो ढुलमुले चरित्र बोकेको दलमा दर्ज थियो । केही वर्षकै अन्तरालमा एमालेको राजनीति यति विधि खस्कियो, अहिले मान्छेहरू प्रश्न गर्न थालेका छन्— एमाले कुनै राजनीतिक दल नै हो ? यो प्रश्न किन पनि उठेको छ भने, एमालेमा अब कुनै दलीय चरित्र बाँकी रहेन । दम्भ, अहंकार, कुण्ठा, निरीहता, हुतिहारापन र अवसरवादी चरित्रजस्ता अनेक अराजनीतिक प्रवृत्तिको भारीले एमाले उठ्नै नसक्ने गरी थिचिएको छ ।
दम्भ र अहंकारका अगुवा ओली नै हुन् । छुद्र बोल्ने, जालझेलमा विश्वास गर्दै आफूलाई पछ्याउने ‘छोटे’ हरूको दस्ता उनले पार्टीपंक्तिमा निर्माण गरेका छन् । शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन माओवादीलाई भित्र्याएयता चलेको अन्तरपार्टी संघर्षमा उनको अहं निरन्तर प्रकट भइरह्यो । पार्टी विधान, संविधान केही वास्ता गरेनन् उनले । निरन्तर मिच्दै जसरी पनि शक्तिमा रहिरहने प्रपञ्च मात्रै गरिरहे ।
ओलीले शक्तिको अभ्यास बढाउँदै लाँदा उनीनजिक रहेको, आश गरिएको नेतृत्व पंक्तिमा चाकर प्रवृत्ति विकास भयो । सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने आँट तिनले देखाउन सकेनन् । सार्वजनिक छवि ध्वस्त हुँदै जाँदा पनि ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, सुवास नेम्वाङजस्तो समाजले आश गरेको नेतृत्व वर्गले ओलीको दासत्व स्वीकार गर्‍यो ।
माधव नेपाल ‘इगो’ बाट निर्देशित भए । ओलीले प्रचण्डसँग ‘पावर सेयरिङ’ गरेपछि तत्कालीन नेकपामा नेपाल किनाराका साक्षी बन्न पुगेका थिए । ओली र प्रचण्डबीच टकराव हुँदा मात्रै उनी निर्णायक हुन सक्थे । अन्यथा उनी निरीह बनेका थिए । जब ओली–प्रचण्ड टकराव बढ्यो, नेपालले मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गरेर नेकपाभित्र सल्केको अन्तर्द्वन्द्व व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्नुपर्थ्यो । तर, ओलीले उनलाई यति धेरै प्रताडित गरेका थिए, उनी प्रचण्डतिर उभिए । शीर्ष तहमा हुर्केको प्रतिष्ठाको लडाइँ बढ्दै जाँदा नेकपा त रहेन नै, एमाले पनि रहने/नरहने अवस्थामा आयो । संविधान पटक–पटक मिचेपछि नेपालले जे राजनीतिक बाटो हिँड्नुपर्थ्यो, त्यो हिँडे । त्यो सही छ । तर, अन्तर्द्वन्द्व बढेका सुरुआती दिनमा उनले आफ्नो स्वभावअनुसार समन्वयकारी भूमिका खेलेका भए, सायद आजको दिन नआउन पनि सक्थ्यो ।
यो अवस्थाको जिम्मेवार दोस्रो पुस्ताका ‘मूर्धन्य’ हरू पनि हुन्, जसको हुतिहारापन र अवसरवादी चरित्र एमालेको काया फेर्ने कुरामा बाधक भएको छ । घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, गोकर्ण विष्टलगायतले पार्टी एकताको नाममा खेलेको भूमिका निराशाजनक छ । यो पुस्ताले नेतृत्व आफूले लिनुपर्छ भन्ने आँट नै गर्न सकेन । ओली र माधवलाई मिलाउन हिँडेको यो पुस्ताले कम्तीमा पार्टीले गरेको व्यवस्थाअनुसार, सत्तरी कटेका नेताले विश्राम लिनुपर्छ भन्नसम्म सकेको छैन ।
न मिल्न सक्ने, न विभाजित हुन सक्ने अवस्थामा छ एमाले । ओलीले माधव नेपालबिनाको एमाले बनाउने सोचेका छन् । बालुवाटारबाट बहिर्गमन भएपछि बालकोटको बार्दलीबाट उनले त्यही उद्घोष गरे । यसअघि नै कुनै बेला नेपालनिकट तर हाल ओली कित्तामा पुगेका शेरबहादुर तामाङले ‘विपक्षीलाई सत्ताको श्रीपेच पहिर्‍याउनेहरूलाई पार्टीमा स्वागत गर्न नसकिने’ बताइसकेका थिए । गोकुल बाँस्कोटालगायत ओली समूहका नेता–कार्यकर्ताहरू नेपालबिनाको एमालेको पक्षमा धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
न माधव नेपालबिनाको एमाले यति बेला सम्भव देखिन्छ, न ओलीबिनाकै । बरु पार्टी र सरकार दुवैमा असफल, शक्तिशाली पार्टीलाई छिन्नभिन्न पार्ने ओलीबिनाको एमाले बौरिन सक्ला । तर, पार्टीमा पकड अझै राख्न सकेका र सत्ताच्युत हुँदा पनि उस्तै तुजुक देखाउन सकेका ओलीको विकल्प त्यो समूहले सोच्दैन ।
अधिकांश एमाले नेता–कार्यकर्ता ओली–नेपालसहितको एमाले नै चाहन्छन् । तर, जुन स्तरको आवेश, गालीगलौजमा यी दुई समूह ओर्लेका छन्, तत्कालका लागि त्यो पनि सम्भव देखिँदैन । दुवै समूहका दोस्रो पुस्ताका नेता एक ठाउँमा आउने हो भने बरु नेपाल र ओलीबिनाको एमाले चाहिँ बन्न सक्छ । दोस्रो पुस्ताका दुवै गुटका नेता एक ठाउँमा आएर शीर्ष तहलाई बिदा दिने गरी राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न सक्ने हो भने यो एमाले पुनर्गठनको नयाँ शिरा हुन सक्छ । यो परिवेश बनाउन पनि एमालेको यो पुस्ता तयार छैन । उमेर समूह, पार्टीमा लगानी, क्षमता उस्तैउस्तै भएका दोस्रो पुस्ताका समकक्षीले कसलाई नेता मान्ने ? यी अवस्थाहरूले गर्दा एमाले न बेग्लाबेग्लै हुन सक्ने, न त मिलेर अघि बढ्न सक्ने अप्ठेरो अवस्थामा छ । तल्लो तहसम्म विभाजित कार्यकर्ता पंक्ति या त गुटको तावेदारी गर्छ या निरीह र निराश छ ।
कुनै बेला प्रगतिशील राष्ट्रवादको कुरा गर्ने, जनजीविकाको मुद्दा उठाउने एमालेको राजनीति आज व्यक्तिप्रधान भएको छ । यसका नेताहरूलाई अराजनीतिक बाटो हिँडेकामा चिन्ता छैन । बरु नेताहरूको व्यवस्थापन कहाँ कसरी गर्ने, कसरी एकता गरेर ‘एमाले नामक कम्पनी’ जीवित राखिराख्ने र त्यसमार्फत शक्ति आर्जन गर्ने अनि त्यसको स्वाद चाख्ने भन्ने नै ध्याउन्न छ । एमाले नेतृत्वले जनताका नाममा जति नै भाषणवाजी गरे पनि उनीहरूको मुख्य स्वार्थ शक्ति र सत्ता नै हो, अग्रगामी राजनीति होइन ।
एमालेको राजनीति फेर्न दोस्रो पुस्ता किन तयार छैन ? किनभने यो पुस्ता जोखिम लिन चाहँदैन । यसको वर्ग फेरिएको छ । जोखिम त्यसले लिन्छ, जोसँग गुमाउने केही हुँदैन । हिजो निरंकुशकालमा यी नेताहरूसँग गुमाउने केही थिएन । जिते ‘हस्तिनापुरको राज’ भन्ने थियो, हारे गुम्ने केही थिएन । आज गुम्यो भने सानसौकत, सत्ता, पद र प्रतिष्ठा, फेरि शून्यबाट संघर्ष थाल्ने आँट र चाहना यो पंक्तिमा छैन । त्यसैले राजनीतिका नाममा प्रहसन र रमिता हुँदा पनि दोस्रो पुस्ताका नेताहरू त्यसलाई बदल्ने बाटोमा छैनन् । यो अवस्थामा एमालेरूपी फिनिक्स चरोले नयाँ काया कसरी पाऊला ?
नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन कानुनविद्को सुझाव
आयोग खारेजीपछि भूमिहीनलाई लालपुर्जा नपाउने चिन्ता
काठमाडौँ — कीर्तिपुर नगरपालिका–१० का वीरेन्द्र शाक्यको टुझोलमा एक आनामा बनेको घर छ । २०५५ असारमा बनेको सुकुम्बासी आयोगले कीर्तिपुरलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने भनेपछि उनी त्यतिबेला लालपुर्जा पाउने आसमा हर्षित थिए । तर गठन भएको ५ महिनामै आयोग खारेजपछि आशा निराशामा परिणत भयो । उनले २०५५ यता ७ पटक त्यस्तै निराशा भोगिसके । पछिल्लोपटक २०७६ मा गठित आयोग […]
कहिले माओवादी नछाडेको भन्दै सर्वोच्चमा, कहिले एमालेको बैठकमा
काठमाडौं : नेकपा (माओवादी केन्द्र) छाडेर एमाले प्रवेश गरेका चार नेता बुधबार सर्वोच्च अदालत पुगे। (माओवादी केन्द्र) नै अवैधानिक भएको भन्दै निर्वाचन आयोगसम्म पुगेका उनीहरू सांसद पद दाबी गर्न अदालत पुगेका थिए। तर, माओवादी अवैधानिक भएको दाबी गर्दै गर्दै निर्वाचन आयाेग पुगेका चार नेताहरूले आफूहरू औपचारिक रूपमा एमाले प्रवेश नगरेको बताउँदै आइरहेका छन्। माओवादीबाट निर्वाचित […]
साउन ६ धनगढीः नेकपा सुदूरपश्चिम कमिटीका अध्यक्ष नेता कर्णबहादुर थापाले भीम रावल आफूहरुतिर आए समस्या नहुने बताएका छन्। ‘भीम करमेड ठीक ठाउँमा उभिएपछि प्रेम आलेहरु गएर केही फरक पर्दैन’ उनले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भनेका छन्। नेतृत्वको वरिपरि रहेकाहरुले नेता र कार्यकर्तालाई जोड्ने काम नगरेको उनको गुनासो थियो। संसद्मा फ्लोर क्रस गर्ने २२ सांसदले स्पष्टीकरण सोधेको […]
नागरिक रैबार/बाजुरा ४ साउन । नेपाली काँग्रेसको १४ आँै राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा सातौँ जिल्ला अधिवेशन नजिकीदै गर्दा बाजुरामा निकै माहोल तातिएको छ । नेपाली काँग्रेसका गाउँदेखि जिल्ला स्तरीय नेता तथा कार्यकर्ता गणितीय हिसाव कितावमा व्यस्त भईरहेका छन् । यतिबेला केन्द्रदेखि बाजुरासम्म देउवा प्यानलको हालिमुहाली भने निकै सरगर्मीका साथ अघि बढी रहेको पाईएको छ । यस […]
एमालेमा ३ नेता गणतन्त्रको विपक्षमा थिए : वामदेव
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको लिखित प्रस्ताव राख्ने व्यक्ति आफू भएको बताएका छन् । पार्टीमा गणतन्त्रको प्रस्ताव राख्दा तीनजना नेताहरु विपक्षमा उभिएको नेता गौतमले बताएका छन् । शनिबार १४ औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा नेता गौतमले एमालेभित्रका गणतन्त्र विरोधी नेताहरुको स्मरण गरेका […]